MJTD InitiatesaResponsible Business Seminar for Locators in Thilawa SEZ | Myanmar Japan Thilawa Development
Myanmar Japan Thilawa Development
THILAWA SEZ Complaint Management Procedure
Home » News & Press Release » Press Release » MJTD InitiatesaResponsible Business Seminar for Locators in Thilawa SEZ
MJTD InitiatesaResponsible Business Seminar for Locators in Thilawa SEZ
April 2022, 08
With the honorable presence of the Myanmar Center for Responsible Business (MCRB), Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. (MJTD) initiatedaseminar for its locators from Thilawa Special Economic Zone on 5th April 2022. The online seminar aims to provide the key points for doing responsible business based on the analysis of business operations by multinational companies in Myanmar. Together with the MJTD team,atotal of 84 locators of the Thilawa Special Economic Zone participated in the seminar.
MJTD stated that "As being the responsible developer for Thilawa SEZ, we want to spread awareness of the responsible business to our locators. We have been operating the businesses ethically and responsibly ever since we started operations in Myanmar. And we believe that respecting business operations is critical to becomingagood responsible and sustainable business. Also, we - the developer of Thilawa SEZ have committed to follow the ten principles and guidelines of UN Global Compact in order to be more responsible and sustainable business both for our stakeholders and the country - Myanmar."
Myanmar Centre for Responsible Business is an organisation which encourages responsible business activities throughout Myanmar and has worked to promote dialogue among Thilawa stakeholders since 2014. MCRB contributed to the adoption by the Thilawa SEZ Management Committee in August 2015 of Guidance on responsible investment for all companies, Myanmar and foreign,who are investing and doing business in the SEZ, including subcontractors. During the seminar, guest speaker Mrs. Vicky Bowman, Director of MCRB highlighted the eight points in this guidance, and what locators from Thilawa SEZ should consider, in addition to fully meeting their obligations under applicable Myanmar laws.
MCRB stated "MCRB continues to believe investments which conduct business responsibly are in the long-term interests of Myanmar and all its people. It is more important than ever that investors in Myanmar create safe and decent jobs and operate responsibly, not just in line with the existing law, but international standards. Beyond that, investors have the opportunity to support local communities and ’create shared value’ for Myanmar. In these challenging times, I hope that locators in the Thilawa SEZ can work together with MJTD to strengthen links with local communities and support the livelihoods and potential of those who live in the area, particularly young people, and those who are vulnerable."
Thilawa SEZ is located 23 km southeast of Yangon, is the first large-scale SEZ in Myanmar and is being developed in phases under MJTD,apublic-private partnership joint venture initiated by Myanmar and Japan. It had become fully and commercially operational in September 2015. Currently, approximately 90% percent of the factories in Thilawa SEZ is operational, providing over 13,500 jobs for Myanmar people.
Myanamr Version Press Release
သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်မှ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများအတွက် တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို
MJTD မှ ဦးဆောင်ကျင်းပ
(ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ဧပြီလ ၈ ရက် ၂ဝ၂၂)။ မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြု ဌာန (MCRB) ၏တက်ရောက်မှုဖြင့် မြန်မာ-ဂျပန်သီလဝါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလိမီတက် (MJTD) မှ ဦးဆောင်ကာ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်မှ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများအတွက် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ဧပြီလ ၅ ရက် ၂ဝ၂၂ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ၏လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများကို စီစစ်သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စေရန် လိုအပ်သည့် အဓိကအချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလိမီတက်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော ကုမ္ပဏီ (၈၄) ခု တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ-ဂျပန်သီလဝါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလိမီတက် က "သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရဲ့ တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ developer ဖြစ်တာနဲ့အညီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုကြတဲ့သူတွေကိုလည်း တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ စီးပွားရေး နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အသိပညာတွေ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်လည်ပတ်ကတည်းက ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ တာဝန်သိသိနဲ့ လုပ်ကိုင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်သိပြီး ရေရှည်တည်တံ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတစ်လျှောက်လုံး လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစား လိုက်နာခြင်းဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို အပြည့်အဝလက်ခံယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သီလဝါအထူး စီးပွားရေးဇုန်ရဲ့ developer အနေနဲ့ UN Global Compact ရဲ့အခြေခံမူ (၁ဝ) ချက်နဲ့အညီ လမ်းညွှန်ချက်များကို မပျက်မကွက်လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး stakeholder များနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်စေဖို့ ကတိပြုထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။" လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ တာဝန်သိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အားပေးပြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစတင်ကာ မြန်မာ-ဂျပန်သီလဝါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလိမီတက်နှင့် stakeholder အကြား ဆွေးနွေးမှုများမြှင့်တင်ရန် လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီမှ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် အတည်ပြုခဲ့သည့် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ တစ်ဆင့်ခံ ကန်ထရိုက်တာများအပါအဝင် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများအတွက် တာဝန်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်ကို MCRB က ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ထိုလမ်းညွှန်ချက်မှ အချက် (၈) ချက်ကို အထူးဧည့်သည်တော်ဖြစ်သည့် MCRB ၏ Director ဖြစ်သူ Vicky Bowman က အလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီး သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်မှ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အပြည့်အဝကိုက်ညီထားသော်လည်း ထက်မံထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့် အချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန က " MCRB အနေနဲ့ တာဝန်ယူမှုရှိစွာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာပြည်သူအားလုံးရဲ့ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့ တည်ဆဲဥပဒေသာမက နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ လုံခြုံပြီး သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေဖန်တီးပြီး တာဝန်သိသိနဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့က အလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ ဒေသခံအသိုက်အဝန်းတွေကို ပံ့ပိုးကူညီဖို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လုပ်ငန်းအတွင်းမျှဝေထားတဲ့တန်ဖိုးစံနှုန်းများကို ဖန်တီးဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ အခုလိုစိန်ခေါ်မှုများတဲ့အချိန်မှာ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေဟာ ဒေသခံ လူထုတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေမှာ ပိုမိုအားကောင်းလာစေဖို့၊ ဧရိယာအတွင်းနေထိုင်ကြသူများ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေနဲ့ အားနည်းချက်ရှိသောသူများရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုနဲ့ အလားအလာတွေကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့အတွက် MJTD နှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။" လို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဆုံး ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့်စီးပွားရေးဇုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် (၂၃) ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။ ၎င်းကို မြန်မာ-ဂျပန် နှစ်နိုင်ငံ လက်တွဲဆောင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (public-private partnership) တစ်ခုဖြစ်သည့် မြန်မာ-ဂျပန် သီလဝါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလိမီတက်မှ တစ်ဆင့်ခြင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ပြီး ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှစတင်ကာ အပြည့်အဝ စီးပွားဖြစ်လည်ပတ်နိုင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရှိ စက်ရုံများ၏ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် လည်ပတ်နေပြီး မြန်မာပြည်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်ပေါင်း (၁၃,၅ဝဝ) ကျော်ကို ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။
All rights reserved. Copyright © 2018, MJTD.